netzay.com.mm : Myanmar Online Shopping, Shopping Websites:Log In ၀င်မည်
မင်္ဂလာပါ။ netzay.com.mm မှကြိုဆိုပါတယ် ။
ဈေးဝယ်သူအသစ် အဖြစ် စာရင်းသွင်းခြင်း( အကောင့်အသစ်ဖွင့်ခြင်း)
မင်္ဂလာပါ . netzay မှာဈေးဝယ်ကြမယ့် Customer များကို မိမိကိုယ်ပိုင်အကောင့်ရရှိစေရန် အကောင့်ဖွင့်စေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် . အကောင့်ဖွင့်စဉ်တစ်ကြိမ်သာ မိမိနာမည် လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်များကို ဖြည့်စွက်ထားရုံနဲ့ နောက်ထပ်ဝယ်ယူသောအကြိမ်များအတွက် ထပ်မံဖြည့်စွက်ရန်မလိုတော့သည့်အပြင် ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ရှိခြင်းကြောင့် လိပ်စာ အသစ်ထပ်ထည့်နိုင်ခြင်း. မိမိ၏အော်ဒါများကို ပြန်လည်စစ်ဆေးနိုင်ခြင်း များ အစရှိသည်တို့ကို စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်.
ဈေးဝယ်သူ (Customer) များ Log-In ၀င်ရန်
Password မှတ်ထားစေချင်သလား ? Password မေ့နေပြီလား ?
Facebook အကောင့်ဖြင့် ၀င်ပါမည် ။ သင့်အကောင့်လုံခြုံရေးအတွက် အပြည့်အ၀အာမခံပါသည်။
မင်္ဂလာပါ NetZay မှကြိုဆိုပါတယ် ။ အကောင့်ဖွင့်ရန်အတွက် အဆင့်တစ်ဆင့်ချင်းဆီ ကို သေချာစွာရှင်းပြပေးထားပါတယ် ။ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော အဆင့်အတိုင်း တစ်ခုချင်းဆောင်ရွက်ပေးပါ ။ သင့်ကိုယ်ပိုင် ဈေးဝယ်အကောင့်တစ်ခု ရရှိနိုင်ပါပြီ ။
ပင်မစာမျက်နှာ (Home Page ) ရှိ ကို နှိပ်ပါ။ အကောင့်ဖွင့်ရန် Register Page ကို ရောက်ပါမည်။
သင်ရဲ့ မွေးနေ့ကို ရွေးချယ်ပေးပါ။
သင် လက်ရှိအသုံးပြုနေသော အီးမေးလ်လိပ်စာကို ထည့်သွင်းပေးပါ။
Log-In ၀င်ရန်သင်အသုံးပြုလိုသော နာမည်ကို ဖြည့်သွင်းပေးပါ။
ပေးထားသော UserName ကို သုံး၍ရမရ စစ်ဆေးပေးပါ။
(သင်ပေးထားသော Username သည်အခြားသူ သုံးထားပြီးသော Username နှင့် တူညီနေလျှင် သင်အသုံးပြု၍ မရပါ။)
သင်လက်ရှိကိုင်ဆောင်နေသော ဖုန်းနံပါတ်ကိုရေးပါ။(ဖုန်းနံပါတ်ကို အင်္ဂလိပ်ဂဏန်းများသာ ရိုက်ထည့်ပေးပါ။)
NetZay မှ ပစ္စည်းအသစ်တင်တိုင်း အမြဲမပြတ်သိရှိလိုပါက အမှန်ခြစ်လိုက်ပါ။
သင့်အကောင့်ကို တစ်ခြားသူများမဖွင့်နိုင်စေရန်အတွက်လျို့ဝှက်စကားလုံးတွေကို ရိုက်ထည့်ပေးပါ။ (အနည်းဆုံးစကားလုံးခြောက်လုံးရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။)
သေချာစေရန်အတွက် လျို့ဝှက်စကားလုံးများကို နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံရိုက်ထည့်ပေးပါ။
အားလုံးဖြည့်ပြီးပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
သင်ဖြည့်သွင်းသည်များ မှန်ကန်ပြည့်စုံလျှင် နောက် Stepေ(နာက်တစ်မျက်နှာ) ကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပြီး တစ်ခုခုမှားယွင်းနေလျှင် မှားယွင်းသည်နေရာကို အနီဖြင့် ပြပြီးသင့်ကို ပြင်ဆင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကြိုဆိုပါတယ်။ NetZay မှာ အကောင့်ဖွင့်တာအောင်မြင်သွားပါပြီ။
အကောင့်ဖွင့်ခြင်းပြီးပါပြီ။အကောင့်ဖွင့်ပြီးပြီ မို့လို့ သင့်၏နာမည် ဖြင့် ၀င်ရောက်နေသည်ကိုစာမျက်နှာ၏ဘယ်ဘက်ထောင့်တွင် မြင်တွေ့ရမှာပါ ဥပမာ-